Ra'isul Wasaare Imran Khan oo ka badbaaday mooshin xil ka-qaadis ah
Ra'isul Wasaaraha Pakistan Imran Khan ayaa Axadda maanta ah ka badbaaday tallabo lagu doonayey in xilka looga tuuro, kadib markii guddoomiye ku xigeenka baarlamaanka uu hor istaagay mooshin kalsooni kala noqosho ah oo uu ku tilmaamay mid aan dastuuri ahayn.
Mucaaradka ayaa isla markiiba wacad ku maray inay kahortagayaan horistaagga codbixinta, oo uu sameeyay xubin ka tirsan xisbiga Ra'iisul Wasaaraha, halka Khan uu kula taliyay madaxweynaha dalka inuu kala diro Baarlamaanka, isagoo dadka Pakistan u soo jeediyay inay u diyaar garoobaan doorashooyin cusub.
"Waxaan talo ugu soo jeediyay madaxweynaha in uu kala diro goleyaasha," ayuu yiri Khan oo khudbad ka jeedinayay telefishinka, laakiin Bilawal Bhutto Zardari oo ah madaxa xisbiga mucaaradka ah ee Pakistan People’s Party (PPP) ayaa ballan qaaday in ay fadhi ku yeelan doonaan xarunta baarlamaanka, isagoo saxaafada u sheegay inay dacwad u gudbin doonaan maxkamadda sare.
Mucaaradka ayaa Ra'isul Wasaare Khan ku eedeynaya inuu ku guul dareystay soo nooleynta dhaqaalaha iyo la dagaallanka musuqmaasuqa.
Ma jiro Ra'iisul Wasaare dhammeystay muddo xileedkiisa shanta sano ah tan iyo markii Pakistan ay xornimada ka qaadatay Britain sannadkii 1947-kii, waxaana dhowr jeer oo hore soo maamulay Pakistan Jeneraallo, kuwaas oo sannad walba khilaaf xooggan kala dhexeeyay waddanka ay deriska yihiin ee Hindiya oo ku hubeysan hubka Nukliyeerka.